सारालाई किन लाग्थ्यो उनका बाबुआमा ‘सारै खराब मान्छे’ हुन् ? - Sunaulo Nepal
सारालाई किन लाग्थ्यो उनका बाबुआमा ‘सारै...
सारालाई किन लाग्थ्यो उनका बाबुआमा ‘सारै खराब मान्छे’ हुन् ?
कार्तिक २१, २०७८ आइतवार ११:४० बजे
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री सारा अलि खानले हालै एउटा अन्तर्वार्तामा बालापनमा आफूले आफ्ना बाबुआमा सैफअलि खान र अमृता सिंह खराब मान्छे भएको ठान्ने गरेको बताएकी छन् ।
उनले आफूले ‘ओमकारा’ फिल्ममा बाबु सैफ र ‘कलयुग’ मा आमा अमृताले निर्वाह गरेको चरित्र देखेपछि उनीहरू सारै खराब मान्छे भएको निर्र्यौल गरेको बताएकी हुन् ।
साराले भनेकी छिन्,‘मलाई याद छ, सन् २००५ मा ‘कलयुग’ र सन् २००६ मा ‘ओमकारा’ हेरेपछि मलाई निकै तनाव भएको थियो । मलाई लाग्यो, मेरो बाबा–मम्मी बहुत खराब मान्छे हुन् । त्यतिबेला म सानै थिए । जब उहाँहरूले एउटै वर्ष बेस्ट नेगेटिभ रोलको अवार्ड पाउनु भयो, यो के हो रु भनेर म चकित परें ।’
‘ओमकारा’ मा सैफले ईश्वर लंगडा त्यागीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । एक्सन थ्रिलर ‘कलयुग’ मा अमृताका साथमा इमरान हास्मी, स्माइली सुरी र आशुतोष राणा मुख्य भूमिकामा थिए । साराका बाबु आमा सन् २००४ मा छुट्टिएका थिए । डिर्भोसपछि सारा र इब्राहम अमृताका साथमा बसेका थिए ।
# सारा अलि खान